Onye isi oche ndị njem nlegharị anya nke Afrịka na ndị nnọchi anya ugbu a na -agagharị na Northern Tanzania
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Onye isi oche ndị njem nlegharị anya nke Afrịka na ndị nnọchi anya ugbu a na -agagharị na Northern Tanzania
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Onye isi oche ndị njem nlegharị anya nke Africa na ndị nnọchi anya njem na Tanzania.
Onye isi oche ndị nlekọta njem nlegharị anya nke Afrịka, Maazị Cuthbert Ncube, ndị otu ndị nnọchi anya ATB sonyere na njem ama ama na Northern Tanzania mgbe ha mechisịrị ihe ngosi njem nlegharị anya mpaghara mbụ nke East Africa ụnyaahụ, Mọnde, Ọktọba 11, 2021.
Njem a bidoro na ala ugwu Meru na mpaghara Arusha.
Ndị otu ha mechara gaa na mmemme njem njem omenala Tengeru nke raara onwe ya nye ichekwa gburugburu n'Ugwu Meru.
Onye isi oche ATB na ndị otu ya ga -eleta akụkụ nke mpaghara Kilimanjaro na ala ugwu Kilimanjaro n'oge njem mmụta ha na -aga n'ihu.
The Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB) Onye isi oche na ndị nnọchi anya ya bidoro njem ha taa na ala ugwu Meru na mpaghara Arusha site na iji nkwanye ugwu gaa na Tengeru Cultural Tourism Programme, etiti hiwere maka ịhazi na inye njem nlegharị anya omenala.
A na -enyekwa mmemme njem nlegharị anya omenala Tengeru maka ichekwa gburugburu ebe obibi na mkpọda ugwu Meru, nke abụọ kachasị elu na Tanzania. A na -arara mmemme a iji dọta ndị njem obodo na ndị mba ọzọ nwere mmasị iso ndị obodo nọrọ ezumike ha wee wepụta onwe ha itinye aka na mmepe mmepe dị iche iche na ọrụ mmekọrịta ọha na eze na -abara ndị obodo ahụ uru.
N'agbata Ugwu Meru na Ugwu Kilimanjaro, Ogige Uche nke Arusha bụ ebe ọzọ na -adọta ndị njem nleta, nke gụnyere ndị sonyere ogbako ahụ mgbe ha gachara nzụkọ n'obodo Arusha. Ọ dị n'agbata asọmpi abụọ na -elele ọnụ ugwu kacha elu na Northern Tanzania, Arusha National Park na -enye ụzọ mgbapụ maka ndị na -achọ izu ike na ngwụsị izu, ọkachasị na -esite n'obodo mepere emepe dị ka Arusha na Moshi na Northern Tanzania.
Ogige Meru kacha nwee ogige ahụ, nke dị mita 4,566 (ụkwụ 14,980), bụ ugwu nke abụọ kachasị elu na Tanzania. Ogige ahụ na -eleghara mbara ọzara ọdịda anyanwụ Kilimanjaro anya na mkpọda Ugwu Meru na -enye ndị njem si Tanzania, East Africa na akụkụ ndị ọzọ nke ụwa njem njem safari. A kacha mara ya nke ọma maka ọdọ mmiri 7, ọdọ mmiri Momella n'ime ókèala ya, yana ọnụọgụ buru ibu kachasị ochie ma e jiri ya tụnyere ogige ntụrụndụ ndị ọzọ na Tanzania.
N'ịbụ nke kpuchiri ọtụtụ ụbọchị, Ugwu Kilimanjaro, ugwu kachasị ogologo n'Africa, pụrụ iche Ebe nlegharị anya njem nlegharị anya nke Tanzania, na -adọta ihe dị ka ndị na -arị ugwu 60,000 kwa afọ. Ugwu ahụ na-anọchite anya onyonyo Afrịka zuru ụwa ọnụ, na nnukwu cone ya nke kpuchiri snow kpuchiri na Africa.
N'ụwa niile, ihe ịma aka nke ịmụ maka, ịgagharị, na ịrị ugwu a dị omimi ewerela echiche nke ndị mmadụ n'ụwa niile. Ruo taa, Ugwu Kilimanjaro abụrụla akara mba na mba dị iche iche, azụmahịa, na ọbụna ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ụlọ ọrụ achụmnta ego na klọb mmekọrịta dị iche iche nwere ndebanye aha ha nke nwere aha ugwu Kilimanjaro iji gosipụta ịdị adị ha dị ebube.
Na 1961, e buliri ọkọlọtọ nke Tanzania ọhụrụ nwere onwe ya n'ugwu ka e bulie ya elu, ọkụ ọkụ nnwere onwe ahụ nọkwa n'elu iji kpalite mkpọsa ndọrọ ndọrọ maka ịdị n'otu, nnwere onwe, na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ugwu Kilimanjaro ka bụ ihe nnọchianya na mpako nke Afrịka site na njem nlegharị anya ya. Edepụtala ugwu a kachasị elu na Afrịka n'etiti ebe ndị njem nlegharị anya 28 n'ụwa maka njem ndụ.